နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲများ အပိုင်း (၁) - Myanmar Network
နေ့စဉ်သုံး အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွဲများ အပိုင်း (၁)
Posted by AungKoU (UMK) on April 29, 2013 at 23:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
အင်္ဂလိပ်စကား ပြောဆိုရာတွင် အသုံးများသော၊ အသုံးဝင်သော စကားလုံးတွဲများ(Phrases) နှင့် စကားပြော ပုံစံ (Pattern) များကို မျှဝေလိုပါသည်။ စကားလုံးတွဲများသည် သီးသန့် တစ်လုံးစီ ခွဲထုတ်၍ မရဘဲ စကားစု အတိုင်းသာ သုံးနှုန်းပြောဆိုရပါသည်။ ထိုစကားလုံးတွဲများကို ပိုင်နိုင်စွာ သုံးနှုန်း ပြောဆိုနိုင်လျှင် အင်္ဂလိပ်စကားပြောရာတွင် များစွာ အထောက်အကူ ပြုနိုင်သလို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်။
I'm getting - ရလာသည်၊ ဖြစ်လာသည်၊ ဖြစ်နေသည်။
- I'm getting better.
- I'm getting ready for bed.
- I'm gettingatooth ache.
- I'm getting tired.
- I'm getting good at reading.
- I'm gettinganew car.
- I'm gettingajob.
I'm trying + (verb) - ကြိုစား အားထုတ် နေသည်။
ဖော်ပြပါ ပုံစံသည် တစ်စုံတစ်ရာကို စိတ်အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်အားဖြင့် ဖြစ်စေ အောင်မြင်မှုရစေရန်၊ ပြီးမြောက်စေရန် ကြိုးစား အားထုတ်နေသည့် အချိန်တွင် မည်သည့်ကိစ္စကို ကြိုးစားအားထုတ် ဆောင်ရွက်နေသည် တိတိကျကျ ဖော်ပြပေးနိုင်ပါသည်။
- I'm trying to getajob.
အလုပ်တစ်ခု ရဖို့ ကြိုစားနေတယ်။
- I'm trying to educate myself.
- I'm trying to understand.
I’m trying to + V ပုံစံကို သတိထားရပါမည်။ ထုံးစံအတိုင်း to နောက်က infinitive verb သာရေးရပါမည်။ to နောက်တွင် မိမိသုံးသော verb အပေါ်တွင် မူတည်ကာ Obj ကို လိုအပ်လျှင် ထည့်ပေးနိုင်ပြီး မလိုအပ်ပါကလည်း ၎င်း verb ဖြင့်ပင် အဆုံးသတ်နိုင်ပါသည်။
I'm gonna + (verb) - တော့မလို့
“gonna” သည် သဒ္ဒါ စည်မျဉ်းစည်းကမ်း အရ မှားသော်လည်း စကားပြောပုံစံတွင် အသုံးများသော စကားလုံး တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ “going to” နှင့် အဓိပ္ပာယ်တူပါသည်။ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို လုပ်တော့မည့် အခြေအနေတွင် သုံးနိုင်ပါသည်။ သေချာသော အနာဂတ်ပုံစံကို ဖော်ပြရန်အတွက် သုံးနိုင်ပါသည်။
- I'm gonna have some coffee.
- I'm gonna go to work.
- I'm gonna stop smoking.
ဆေးလိပ် ဖြတ်တော့မလို့၊ ဆေးလိပ်သောက်တာ ရပ်တော့မလို့
- I'm gonna take swim lessons.
ရေးကူး သင်တော့မလို့၊ ရေးကူးနည်းတွေ လေ့လာတော့မလို့
- "I'm gonna readabook."
Permalink Reply by Ngreim Hsu Wai on May 11, 2013 at 16:42
Permalink Reply by Kaung Htet Aung on June 2, 2013 at 14:35
Permalink Reply by Myat Thu on July 7, 2013 at 15:55
Permalink Reply by Yan Linaung on February 8, 2014 at 15:26
Permalink Reply by minhantun on April 29, 2014 at 15:12
Permalink Reply by လူလေး on April 30, 2014 at 12:24
Thanks.I've been learned lots of phrasal verbs from here.Like take swim lessons and so on....
Permalink Reply by innocensegirl7@gmail.com on June 3, 2014 at 15:57
Permalink Reply by nyi on December 20, 2014 at 19:44
share is good but download is the best .
Permalink Reply by soethandar on May 30, 2015 at 21:43